अफगानिस्तानमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान शुरु Canada Nepal
काबुल - अफगानिस्तानमा मङ्गलबारदेखि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान शुरु भएको छ । भारत सरकारले उपलब्ध गराएको कोभिसिल्ड पाँच लाख डोजबाट खोप अभियान शुरु भएको हो । अफगान सरकारका अनुसार उक्त खोप पहिलो चरणमा चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारहरुलाई दिइने छ ।
राष्ट्रपति अश्रफ घानीले खोप अभियान शुरु गर्दै पहिलो चरणको खोप अभियान शुरु भएको र यो अफगानी जनताका लागि ठूलो अवसर रहेको बताउनुभयो ।अफगानिस्तानमा करिब ५५ हजार ६०० व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएका र तीमध्ये दुई हजार ४३० जनाको मृत्यु भएको थियो । एएफपी
फाल्गुण ११, २०७७ मंगलवार १४:२४:३५ बजे : प्रकाशित
हङ्‌कङ‌को निर्वाचन प्रणाली फेर्ने चिनियाँ योजनाले निम्त्यायो आक्रोश
काठमाडौँ। हङ्‌कङका "लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि आक्रमण जारी राखेको" भन्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनको निन्दा गरेको छ। बेइजिङले हङ्‌कङमा निर्वाचन प्रणाली बदल्ने योजनाहरू घोषणा गरेपछि अमेरिकाले पछिल्लो आलोचना गरेको हो।
चीनको न्याश्नल पिपुल्स कङ्ग्रेस एनपीसीले शुक्रवार त्यससम्बन्धी योजनाहरू सार्वजनिक गरेको थियो। एउटा प्रस्तावअनुसार हङ्‌कङको एसेम्ब्लीमा उठ्ने सबै उम्मेदवारलाई बेइजिङप्रति वफादार एउटा समितिका सदस्यहरूले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ।
चीनले हङ्‌कङमा गत वर्ष कडा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याएको पृष्ठभूमिमा निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी नयाँ योजना सार्वजनिक गरिएको छ। आलोचकहरूका अनुसार चीनले यूकेसँग गरेको "एक देश, दुई प्रणाली" सम्बन्धी सहमतिलाई उल्टाइरहेको र विपक्षीहरूलाई दबाउने काम गरिरहेको छ।
पहिला उपनिवेश बनाएको यूकेसँग भएको सहमतिअनुसार हङ्‌कङले आफ्नै कानुनी व्यवस्था जारी राख्न पाउँछ र वाक्‌ तथा प्रेस स्वतन्त्रता सहितका अधिकारहरूको त्यहाँ उपभोग गर्न पाइन्छ। त्यो व्यवस्थालाई क्रमिक रूपमा हटाउँदै लगिन्छ भन्ने हङ्‌कङका मानिसहरूमा रहेको डरले सन् २०१९ मा लोकतन्त्रको पक्षमा ठूल्ठूला प्रदर्शनहरू निम्त्यायो।
कतिपय प्रदर्शनहरू हिंसात्मक बन्न पुगे र बेइजिङले अन्ततः नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागु गर्‍यो। नयाँ कानुनले "देशद्रोह"लाई लक्षित गर्ने र हङ्‌कङमा स्थायित्व ल्याउने बेइजिङको दाबी छ। एनपीसीको वार्षिक बैठकका लागि हजारौँ सांसदहरू भेला भएका छन्।
अमेरिका र अरू देशको प्रतिक्रिया के छ ?
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले बेइजिङको कदम "हङ्‌कङको स्वायत्तता, हङ्‌कङका स्वतन्त्रताहरू र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूमाथि एउटा प्रत्यक्ष आक्रमण" भएको बताएका छन्। "यदि तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने त्यसले हङ्‌कङका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउनेछ," उनले थपे।
यसअघि युरोपेली सङ्घले "निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउँदा त्यसले आधारभूत स्वतन्त्रता राजनीतिक बहुलवाद तथा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूलाई कमजोर बनाउन सक्ने कुराबाट राजनीति र अर्थतन्त्रमा पर्न प्रभावबारे सावधानीपूर्वक विचार गर्न" बेइजिङलाई आग्रह गरेको थियो।
यूकेको विदेश मन्त्रालयले "आधारभूत अधिकार तथा स्वतन्त्रता, हङ्‌कङमा उच्च तहको स्वायत्ततासहित हङ्‌कङका मानिससँग गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गरिरहन" चिनियाँ अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेको छ।
हङ्‌कङका लागि के योजना छ ?
एनपीसीका उपाध्यक्ष वाङ्ग चेनले "हङ्‌कङको समाजमा देखिएका दङ्गा र अस्थिरताले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा स्पष्ट कमीकमजोरी रहेको देखाएको" सांसदहरूलाई बताए।
उनले "विद्यमान प्रणालीमा रहेका जोखिमहरूलाई हटाउनुपर्ने र देशभक्तहरू जिम्मेवारीमा रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने" उल्लेख गरे। चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले हङ्‌कङको आन्तरिक मामिलामा हुने हस्तक्षेपबाट चीनले "सुरक्षित राख्ने तथा दृष्ढताका साथ रोक्ने" बताए। बीबीसी
फाल्गुण २२, २०७७ शनिवार १३:४६:०२ बजे : प्रकाशित
# चिनियाँ योजना
भारतमा चौबीस घण्टामा १६ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
काठमाडौँ। भारतमा गत २४ घण्टामा १६ हजार ८३८ जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएपछि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक करोड ११ लाख ७३ हजार भन्दा बढी पुगेकोे केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले शुक्रबार जनाएको छ । भारतमा गत २४ घण्टामा कोरोना सङ्क्रमणको कारण ११३ जनाको मृत्यु भएपछि भारतमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक लाख ५७ हजार ५४८ जना पुगेको छ ।
हाल भारतमा एक लाख ७६ हजारभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् भने एक करोड आठ लाख ३९ हजारभन्दा बढी कोराना मुक्त भएका छन् । भारतमा गत जनवरी १६ देखि कोभिड–१९ विरुद्धको पहिलो चरणको खोप कार्यक्रम शुरु भएको थियो ।
भारतमा गत सोमबारबाट ६० वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिलाई खोप लगाइने कार्यक्रम शुरु भएको छ । त्यसैगरी दिर्घरोगी छन् भने ४५ वर्ष माथीकालाई पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप शुरु छ । यसैबीच, सरकारले देशका विभिन्न भागमा कोभिड–१९ परीक्षणलाई तीव्रता दिने बताएको छ । भारतीय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले मङ्गलबारसम्म देशभर २१ करोड १ लाखको हाराहारीमा नमूना परीक्षण गरेको छ ।
फाल्गुण २१, २०७७ शुक्रवार १७:४२:३६ बजे : प्रकाशित
# १६ हजारभन्दा बढी
# १६ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
अमेरिकामा कोरोनाबाट संक्रमित पाँच महिना यताकै सबैभन्दा कम
काठमाडौँ। संयुक्तराज्य अमेरिकामा पाँच महिनापछि पहिलो पटक कोभिड–१९ बाट दैनिक संक्रमितको संख्या ४० हजारभन्दा कम पाइएको छ । खोप अभियान तीव्र बनाइएको अमेरिकामा अर्को चरणको संक्रमण फैलिने आशंका भइरहेको अवस्थामा नयाँ विवरणले अमेरिकी अधिकारीहरुलाई खुशी तुल्याएको छ ।
लकडाउन र अनेक किसिमका प्रतिबन्धबाट आम जनताको दैनिकी र देशकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको अवस्थामा पछिल्लो विवरण सार्वजनिक भएको हो । विश्वमै सबैभन्दा बढी असर परेको संयुक्तराज्य अमेरिकामा दैनिक संक्रमितको संख्या यसै वर्षको जनवरी महिनाका शुरुआती दिनहरुमा दैनिक तीन लाखसम्म पुगेको थियो ।
दैनिक संक्रमितको संख्यामा कमी र खोपको प्रयोग बढेसँगै अमेरिकाका धेरै राज्यले अनिवार्य मास्क लगाउने नियम हटाइदिएका छन् । तर राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो सोचाई पुरातनपन्थी रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्नो १०० दिने कार्यकालमा १० करोड मानिसलाई खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेका थिए । युरोपमा भने खोप अभियानमा ढिलाई भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
युरोपेली औषधि नियामक निकायले रसियाले विकास गरेको स्पुतनिक भी खोपको सम्भावना बारेमा पनि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । यो खोप उपयुक्त देखिए युरोपमा स्पुतनिक भी खोपका लागि बाटो खुल्नेछ । रसियाले युरोपेली औषधि नियामक निकायले अध्ययन गर्ने जनाएसँगै आफूले युरोपका लागि तत्कालै ५ करोड डोज खोप उपलब्ध गराउन सक्ने बताएको छ ।
युरोपेली युनियनले यसअघि तीन किसिमका खोपलाई अनुमति दिइसकेको छ । तर केही मुलुकले आफूखुशी चीन र रसियाबाट खोप ल्याएर वितरण गर्न थालिसकेका छन् । युरोपमै खोप अभाव भएको जनाउँदै इटालीले अस्ट्रेलियातर्फ पठाउन लागिएको अस्ट्राजेनिकाको खोप लैजान रोकेको छ । युरोपेली युनियनले अस्ट्राजेनिकाले युरोपेली मुलुकलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ ।
अस्ट्रेलियाली स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले युरोपेली युनियनको निर्णयप्रति रोश प्रकट गरेका छन् । अस्ट्राजेनिकाले अस्ट्रेलियालाई २ लाख ५० हजार डोज खोप पठाउन लागेको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको युरोप शाखाले युरोपेली मुलुकमा कोरोना संक्रमण फेरि तीव्र हुन थालेको चेतावनी दिएसँगै युरोपमा खोपको महत्व र आवश्यकता अरु बढेको छ । सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनमा देखापरेको कोभिड–१९ को संक्रमणबाट हालसम्म २५ लाखभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ । गोरखापत्र अनलाइन
फाल्गुण २१, २०७७ शुक्रवार १६:३१:५० बजे : प्रकाशित
# पाँच महिना यताकै सबैभन्दा कम